Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland oo si kulul uga hadlay xil ka qaadistii maanta lagu sameeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland oo si kulul uga hadlay xil ka qaadistii maanta...
Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland oo si kulul uga hadlay xil ka qaadistii maanta lagu sameeyay
Garoowe (Halqaran.com) – Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
Cabdixakiin Dhoobo ayaa sheegay inuu isaga yahay Gudoomiyaha Sharciga ah ee Baarlamaanka Puntland.
Xildhibanaada Barlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay “xilka ka qaadista” Guddoomiyaha Barlamaanka, Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana xil ka qaadistiisa u codeesay 49 mudane, halka 4 xildhibaanna ay ka aamustay.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Puntalnd Abuukaate Cabdicasiis ayaa kudhawaaqay in sidaas xilka looga qaaday gudoomiyihii Baarlamanka Puntland oo aanan ka soo qeybgalin kulankaas xilka looga “xayuubiyay”.
Ugu dambeyn, soo jeedinta xil ka qaadista oo “xalay la gudbiyay” waxaa ku saxiixnaa 44 xildhibaan, sida uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Puntland.
Cabdikariin Maxamed Axmed Dhoobo
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland
xil ka qaadistii baarlamaanka